Kirin’ny lehilahy iray hianika ireo tendron-kavoana 14 avo indrindra ao anatin’ny 7 volana hanamontsanana ny zavabita tsara indrindra · Global Voices teny Malagasy
Ho fanehoana izay azon'ny fahazakan'olombelona atao no tanjon'ny tetikasa
Voadika ny 27 Jona 2019 6:13 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, عربي, русский, Español, नेपाली, čeština , 日本語, Ελληνικά, English
Nirmal Purja MBE, fantatra kokoa amin'ny hoe Nims, no eo am-panatontosana ny fianihana ireo ‘eight-thousanders’ (tendron-kavoana 14 mihoatra ny 8000 metatra) ao anatin'ny fito volana ho fanamontsanana ny zavabita tsara indrindra. Amin'ny maha-zanakalahin'ny Indiana Gurkha misotro ronono azy, dia nanatevin-daharana ny borigadin'ny Gurkhas koa i Nims ary nanao fanompoana tao amin'ny Tafika Manokana sangany britanika. Niroboka tao amin'ny fianihan-tendrombohitra izy rehefa nandao ny tafika ary tsy ampy efatra herinandro no nianihany ny enina amin'ireo tendro avo indrindra manerantany. Eny fa na dia mihamaro aza ireo mpianika no mandoa ny sara avo sy milahatra mba hahatratra ny tendron'i Everest — araka izay porofoin'ny sary nalaza haingana dia haingana nopihan'i Nims teo amin'ny tendro avo indrindra manerantany – dia tsy ampy tohana ara-bola ilay mpianika hanombohany ny dingana faharoa amin'ny Project Possible mission [iraka Tetikasa azo tanterahana]
NP: Tsy isalasalana fa i Dhaulagiri no sarotra indrindra noho ny toetrandro. Nianika tao anatin'ny rivotra tafahoatra any amin'ny 70-75 mph izahay. Rehefa mihena kely ihany ny fifofofofoan'ny rivotra vao afa-mianika izahay ary rehefa mihamafy indray dia mifikitra satria tsy afa-mihetsika izahay fa raha vao manao izany dia faohiny any.
GV: Maro no miteny fa ambonin'ny Camp 4 ao Everest, ary amin'ireo eight-thousanders hafa, tsy misy miraharaha ireo mpianika hafa izany. Manify ny rivotra, ary mitsoka mafy ny tafiotra, ary amin'ny faratampony ny hafanana-hatsiaka. Inona no ataonao raha misy olona mila fanampiana raha an-dalana hanatratra ny tendro ianao?